DAAWO: Maxaa dhacaya hadii Kenya u hogaansami weysi go’aanka Maxkamada? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
October 13, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 3
MUQDISHO(P-TIMES) – Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa go’aamisay Talaadadii shalay aheyd in Soomaaliya la siiyo dhul-badeed baaxad leh oo ku yaal Badweynta Hindiya kaasoo ay u badan tahay inuu hodan ku yahay shidaalka, gaaska iyo kalluunka, halka Kenya ay diiday inay aqoonsato sharcinimada go’aanka Maxkamada, iyadoo ku eedeysay maxkamadda ineysan dhex-dhexaad ka aheyn kiiska.
Maxkamada Caddaaladda aduunka ayaana ku dhawaaqday inaysan jirin “xuduud badeed horay la isugu raacay” waxayna samaysay xuduud cusub oo u dhow midka ay Soomaaliya dooneysay.
Go’aanka maxkamadda ayaana wuxuu siinayaa Kenya qayb yar oo ka mid ah aagga lagu muransan yahay ee xeebaha Bariga Afrika. Laakiin Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaaa wuxuu ku dhawaaqay diidmadiisa qayaxan ee go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah.
Kenyatta ayaa sheegay in dowladiisu ay ku dhawaaqeyso “diidmo buuxda iyo aqoonsi la’aanta go’aankii kama dambeysta” ee ay soo saartay Maxkamadda Caalamiga ah, waxayna arintaan kusoo aadeysaa maalmo kadib markii dalkiisa uu ku eedeeyay hay’addan ugu sarreysa garsoorka Qaramada Midoobay – oo fadhigeedu yahay magaalada Hague – eex iyo ku dhawaaqis in aanay mar dambe aqoonsanayn awoodeeda.
Kenya iyo Soonaaliya ayaa sanado badan ku muransanaa madaxbanaanida dhul badeed ku yaalo xadka ay ku leeyihiin Badweynta Hindiya, waxayna u badan tahay in goobaha lagu muransanyahay ay yihiin goobo hodan ku ah shidaalka iyo gaaska.
Dhanka Somaaliya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa soo dhaweeyay go’aanka Maxkamada asigoona sidoo kale ku boorriyay Kenya inay “ixtiraamto ku dhaqanka sharciga caalamiga ah”, wuxuuna ugu baaqay inay ka tanaasusho sheegashada madaxbanaanida dhulka soomaaliyeed.
Khudbad uu ka jeediyay telefishinka kadib ku dhawaaqistii xukunka, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay iney mihiim tahay in Kenya “ay u aragto go’aanka maxkamadda inuu yahay fursad lagu xoojinayo xiriirka labada dal.”
“Tan iyo markii la i doortay, waxaan wajahnay cadaadisyo siyaasadeed, kuwa diblomaasiyadeed, mid amni iyo mid dhaqaalaba kuwaasoo nooga yimid hoggaanka Kenya,” ayuu yiri Farmaajo.
“Xukunku wuxuu ahaa mid si cad u muujinaya hufnaanta Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda,” ayuuna hadalkiisa raaciyay.
Hadaba maxaa dhici karo hadii ay dhacdo labada dhinac ee is haya haduu mid qaadaco kiiska Maxkamada una hogaansami waayo fulinta amaradooda??
Ugu horeyn Hay’adda Maxkamada Aduunka waxay soo saartaa go’aammada kama dambaysta ah, kuwaasoo aanan wax racfaan laga qaadan karin, laakiin ma lahan habab ay ku fuliso go’aamadood.
Inkastoo ay arintaas jirto hadana hadii ay dhacdo in go’aanka Maxkamada ay qolo gooni ah qaadacdo waxay arintaas keeneysaa iney Maxkamada dacwad rasmi ah u gudbiso Goalaha Amaanka ee hey’ada Qaramada Midoobe, kuwaasoona go’aan cad kasoo saarayo arinka.
Balse hadii ay dhacdo in isla qoladii markale qaadacdo go’aanka golaha Amniga kuna xad-gudubto kiiskii la isku hayay, markaa waxay u nugushahay in la saaro Cunaqabateyn wajiyo badan leh ilaa iyo inta ay kaga hogaansameyso kiiska Maxkamada go’aamisay.
Farmaajo sharafkii ayuu so
Caliyay kenya hada waan
Iska difici karnaa oo
Ciidan waan lanahay inkasta wali dhismo uu ku socoto
Farmaajo uducaya waa geesi
◼In Kenya xoog Ku haysto dhulkaas,Laguna daawado oo shib laga dhaho amaba lagu taageero maadaama Somaliya lahayn maanta awood ay Ku difaacato xuduudeheeda badeed,dhuleed,cireed,lana waardiyaynayo dawladda waxan sheegan laftigeedii,madaxdeedii,baarlamaankeeda,wasaaradeheeda,àyna tahlin sugidda amniga xarumeheeda oo iska kooban iyo amniga dhowrka km ee ay Ku shaqayso.
◼In dawladaha Kenya dhabarka soo taabtay amaba kuwo muranka ka faaiideysanayaa keenaan ciidamo iyo maraakiib dagaal oo la leeyahay waa hawlgalka ilaalinta badda lagu muransanyahay sidaana Ku xaalufiyaan kalluunka,iskana haystaan.
Waa qorshe lamid ah kii budhcad badeedda…
Wallee halkaasan rajo dawladnimo laga sugin.
Weli xataa cid Ku taageeraysa guusha ma jirto Muslim iyo gaaloba.
Waxa aan maqli jiray, “nin xaaskaaga raba inantaada kaama yeelo!”
Sida muuqata, Kenya waxa uu damac kaga jiraa guud ahaan dhulka & badda juba-land, idinna waxa aad ka hadlaysaan 12 mile oo ay QARARAC ku heshay. Odhaah daas kore iskama aysan bixine sabab bay ku timi; nina xaaskiisa laguma qabsan karo illaa usaga laga arko mooyaane. Adeer, dadnimay u baahantahay meeshu.
Maanta waxaa wasiirka koowaad noo ah mid macawiso xirayaba, oo aan laba garanayn wax lagu qiimeeyo. Shalayna waxaa madaxweyne noo ahaa mid BAKHTI u sujuudaya; hadda waa nimankii waddanka uu madaxweynaha u sheeganayo ku soo duulay!
Ninka maanta villa Somalia ka ah madaxweynaha bal isna qiimeeya, maxaa kuu soo baxaya? Waligiin ma aragteen nin madaxweyne u sheeganaya waddan burburay oo aan hadlayn oo qol ku dhex jira?!
Rooble in uu Uhuru macawiso u xiro, oo uu isu dulleeyo, Farmaajo ayaa sabab u ah. Isaga ayaa bixiyey fursaddii ay Rooble & Uhuru isku arkeen Jabuuti & Ingiriiska. Sidee bay ku dhacaday in Rooble aad u dirto Ingiriiska adiga oo og in Uhuru iyo kooxdiisu tagayaan, oo SHIRQOOLLO laga maleegi karo? Maxaa kuu diiday in aad Ingiriiska tagto, yaad ka BAQAYSAY? Maxaa qolka kugu soo xidhay oo aad la aammusantahay? Marka intaa la eego, Rooble waa laga gardaranyahay haddii uu kastuumooyin xiro & haddii kaleba.
Tusaale, wasiirkii koowaad ee dawladdii Cabdi-qaasim, waa AHU Galaydhe, waxa lagu xasuustaa in uu dawladdii awoodda badnayd ee Itoobiya uu la dagaalamay, oo uu ka saaray dhulka Soomaaliyeed, ee ay ku sugnaayeen khaasatan gobolka Gedo. Waxaynu kale oo wada ognahay in dawladdii Carta ay ku meel gaadh ahayd, oo uu Cabdi-qaasim gurigiisa madaxtooyo ka dhigtay.
Maxay haddaba ku dhacday in Kenya & Itoobiya ay waddankii si SHARCIYAYSAN ugu dhex jiraan, oo ay dawlad Soomaaliyeed u sharciyaysay qabsashadooda?! Hadday taasi hore u dhacday, maxaa waddanka looga saari la’yahay, oo loola imanwaayey qorshe lagu saaro, iyada oo uu waddanku kumeelgaadhkii ka baxay?
Taa iska daaye, Farmaajo indhihiisa oo shan ah baa maamulka Juba-land ay Kenya caleema saaratay; muxuu ka qabtay? Waxa aan arkayey isaga oo khudbaddiisii ugu danbaysay ee shalay ku soo daray; waar maxaad markii ay taagnayd ka qabatay? Maxaad ka faa’iiday Amxaarkii aad u tagtay ee Abiy, illeen waa adigii Ingiriiska aadi waayaye?
Waxaas baa waddanka iska soo kala beddelay, miyayna marka Kenya u ekayn in ay siday doonto u hadasho? Micnihu maaha in aad qoryo waaweyn haysato oo aad feedho weyn tahay, micnuhu waa in aad ku dhac leedahay oo aad dadnimo leedahay. Taas baa meesha ka maqan. MADAXWEYNAHA SSC aad baad uga xanaajiseen maanta.
Taa haddaan dhinac iska dhigo, waxa aan arkayey nimankii isku beesha ahaa oo Muqdisha xaflad ku qabsaday shalay. FADEEXADDII BADDA (MoU) waxa ay dusha ka saareen CCRashiid! Qabyaaladdu heerka ay gaadhay baan ka yaabay. Waar ma daawanaseen? Illaah baa noo maqan.
Gunaanadkii, Kenya way gabidhaclaynaysaa, sidaas bayna ugu dhammaatay. Dagaalna wax ku qaadimayso, oo sharcina waa looga adkaaday. Waxba bakhbakhdooda ha arkina.